2010 ~ दीप्सको डायरी
मरुभूमिको छातीमा बरालिएका चार दिन
दिप्स शाह on 3:53 PM
एउटा सौभाग्य भन्नुपर्छ जागिर पकाउँदै मैले मध्यपूर्बको सुन्दर र बिकसित् देश -यहुदी राज्य इज्राएलको लगभग सबै भाग घुमिसकेको छु। मलाई यो मौका प्रदान गर्ने मेरी पछील्ली अन्नदाता चिपोरा तलोर संग म सदा सदाको लागि आभारी रहनेछु। उनकै कृपाले गत मार्च महिना मा अर्को एउटा अर्थपूर्ण भ्रमणको सुयोग जुर्यो। मार्च को २९ तारिख हाम्रो पूर्व योजना मुताबिक याहूदिहरुको महत्वपूर्ण धार्मिक पर्ब "पेशाख" को अवशरमा हामी लाग्यौँ उत्तरी इज्राएलको एक रमणिय मरुभूमिय पर्यटकिय स्थान "मिज्पे रमोन" तिर। जहाँ हाम्रो चार दिने बसाइ हुनेथियो इज्राएलको प्रसिद्द होटेल 'इस्रोटेल' को एउटा साखा "इस्रोटेल इन" जो चिपोराले चाडको खचाखच लाई ध्यान राख्दै लग्भग ४ महिना पहिलेनै रिजर्भ गरिराखेकी थिन्।
सुरुमा म त्यती खुशी थिईन यो भ्रमण् लाई लिएर । मरुभूमिको पनि के भ्रमण् गर्नु त्यै उराठ ढुङ्गे बगर जस्तो त हो नि भनेर मलाई त्यती फूर्ती लागेकै थिएन। यो एकहप्ते लामो पर्बको खुशीयालीमा चिपोरा र उनको भतिज रामी भने खुशीले दंगदास थिए। सामान प्याक गरिओरी दिंउसो तिर हाम्रो गाडी लाग्यो उक्त स्थान तिर। होटेल पुगेपछी केही रमाइलो लाग्यो। मरुभूमिको छेउमा शान्त बातावरणमा उभिएका सुबिधायुक्त होटेलहरुको ताम्झाम ले मलाईकेही रमाइलो लाग्यो।त्यो दिन पर्बको सुरु दिन भएकोले हामी बस्ने होटेलको बाहिर भित्र खचाखच पाहुनाहरु भरिभराउ थिए। हामीले आ आफ्न सामान आफ्ना कोठामा लगेर मिलाइसकेपछी एक छिन् सबै जना आराम गर्न पल्टियौँ । बेलुकी ८ बजे तल डाइनिङ्ग हल मा झरेपछी मलाई लाग्यो यो कुनै होटेल नभएर मेरो घर छेउको कृष्ण मन्दिरको जात्रा हो। बिस्तारै भिड पन्छाउँदै हामी आफ्नो नम्बरको टेबल घेर्न पुग्यौँ। एकैछिनमा सबै ब्यबस्थित भएर बसेपछी हाम्रो तिर पुरोहित भने जस्तो याहूदीहरुको धार्मिक गुरु 'राब' (जसको दुईतिर कन्चेट बाट कपालको लामो घुमुर्के लुर्को झुण्डिएको थियो, ट्टुपीको थेक्लो छोप्ने सानो गोलाकार टोपी टाउकोमा थियो,सेतो कमिज र कालो पाइन्टमा सजिएर एक खालको कालो किनारा र सेतो भुइँ गरेको बर्को जस्तो दुबै काँधमा राखेका) ले लामो पाठ गरे अनी धार्मिक रिवाज अनुरुप सुकेको पाप्रो जस्तो रोटी बिबिध सलादहरु संग वाइनको चुस्की संगै खान थाले। मैले पनि त्यसै गरेँ। स्वाभावत: म धार्मिक सहिष्णुता भएको सुन्दर देश को नागरिक भएरपनी होला मलाई फरक धर्मका रितिरिवाजहरु मा घुलमिल हुँदा अलग्गै आनन्द र ज्ञान प्राप्त गरेझैँ लाग्छ। काश्! हाम्रोमा अहिले धर्मको आडमा तेरो र मेरो भन्दै बितण्डा मच्चौन खोज्नेहरुले पनि यस्तै समभाब राखिदिए भाईचाराको बिस्तार हुन्थ्यो होला।
यसरी धार्मिक रिवाज अनुरुप निक्कै लामो बिधी गर्दै मिठा मिठा परीकारले त्रिप्त भइसके पछी त्यो भब्य डाइनिङ्ग हल छोडेर हामी आफ्नो कोठा फर्कियौँ । चिपोराका काकी भतिज गफिन थाले ,म एक कप कालोकफी सुर्क्याइसकेर सुटुक्क आफ्नो कोठामा पसेँ ,ध्रुबचन्द्र गौतम दाई को उपन्यास "घुर्मी" मा हराउंदै कतिबेला फुस्सै निदाएछु।
भोलिपल्ट बिहान याने कि ३० मार्चको सुर्योदय आलस्यपूर्ण भएर आयो, किन कुन्नी मलाई कता कता खल्लो लगिरहेको थियो यो बिहान,मनमा कुरा खेलाउँदै कफिको सुर्को तान्दै थिएँ मोबाईल को रिङ्गग ले ध्यान तान्यो। रिसिभ बटन थिच्नासाथ् सुनेँ," मम्मी आई लब यु!! हजुर के गरिरनुभाको?? हामी त आज टि भि मा भुइँचालोको फिल्म हेरिराको।" छोरा र बाबुको यस्तै अरु निकैलामो गन्थन र बेलिबिस्तार सुनेपछी एकाएक मैले शरीरमा शितको थोपा थोपा गालामा बोकेर मुस्कुराइरहेको गुलाफको फूल झै स्फुर्ती महसुस गरेँ। दुई दिन देखी परिवार संग कुरा गर्न नपाएको नियास्रोले पो रहेछ मेरो आलस्यता बढाएको। कफीको कप रित्याइसंगै सबैजना तयार भएर लाग्यौँ सबैभन्दा ठुलो ज्वालामुखिको मुख desert crater view हेर्न भनी। यात्राको सुरुवात त्यहा गेट कै अफिस बाट हुने भयो। चिपोरा ले टिकट किन्दै थिईन् एउटी सुन्दरी गोरिले केही पर्चा र नक्सा संगै एउटा बडेमानको प्लास्टिकको थैलो थमाइन् मेरो हातमा र सोधिन् हामी सँग सलाई, लाइटर छभने त्यही अफिसमै राख्नुहोला र अनिवार्य प्रतिब्यक्ती ५ लिटर पिउने पानी बोक्नुहोला पनि भनिन्। पानी त पिउनलाई हो त्यह मरुभूमिको तातोमा तर सलाई भए लैजान किन नपाउने र यो भाङ्रे झोलाकिन?? अनी चिपोराले प्रस्ट्याइन ,,त्यहा बिभिन्न भौगोलिक, प्राकृतिक मह्त्व राख्ने किटपतङ्ग ,चिज्बिज हुन्छन्। भूलबस् या जानिजानी ति चिजमा आगोलागेर नष्ट हुन नपाउन\_ भनेर सलाइ निषेध गरिएको रहेछ अनी केहीपनी फाल्तु चिज जताततै फ्याक्दा उक्त पर्यटकिय स्थलको स्वच्छता घट्ने मात्रै नभएर सोभा पनि बिग्रिने हुँदा पर्यटकहरुलाई उक्त झोला बोकाइँदो रहेछ कि आफुले फाल्ने सबै फाल्तु चिज त्यही झोलामा हालेर बोक्दै हिँड्ने अनी जहाँ पुगेर फोहरका कन्टेनर भेटिन्छन्\_ त्यही लगेर बिसाउने। मैले त्यसबेला आफु काठमाडौं हुँदा कसैका पर्बाह नगरि भान्छाको घुर्यानको पोको झ्यालबाट बिसर्जन गर्ने गरेको सम्झेँ र लाज र ग्लानिले भुतुक्क हुँदै आँफैँलाई धिक्कार्दै सोचेँ एकछिन तिनै अब्यबस्थित फोहोरका थुप्राभित्र हराइरहेको हाम्रो सभ्यताको अन्योल भबिस्य । हरे! मेरो बुद्दिको गरिबि!!(हाम्रो चेतको गरीबी!!)।
उक्त महत्वपूर्ण ठाउँको स्थानिय नाम "माख्तेस रमोन" रहेछ। अन्दाजी ४० किमी लम्बाइ र ९ किमी चौडाइ मरुभूमिको छातीमा पसारिएको उक्त क्राटर समुन्द्री सतह बाट १०३७ मिटर उचाइको 'माउन्ट रमोन' छिचोल्दै इजिप्सियन किनारा छुन पुग्दोरहेछ। भुगर्भसास्त्री हरुको अध्ययन अनुसार करीब २२० मिलियन बर्ष पहिले को शक्तिशाली उत्पातपूर्ण ज्वालामुखिका कारण बन्न पुगेको उक्त क्राटर प्रागएितिहासिक चट्टानिक जैबिक अबशेष ,रङ्गिन स्यान्ड्स्टोन,बिबिध खनिजपदार्थ का कारणले अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेछ।
स्वाभावत: बाटमा भेटिएका प्र्त्यक आकर्शण लाई मैले फटाफट क्यामेरामा कैद पनि गर्दै रहेँ। कुशल काष्ठकर्मिले आकार दिएको काठको टुक्राझैँ देखिने ति लाखौं बर्ष पहिले रहस्यात्मक ज्वालामुखिले बनाएका काला चिल्ला प्रिज्मी ढुङ्गा, त्यस्ता ज्वालामुखिद्वारा निर्मित बेजान ढुङ्गाका चेप चेपमा अदभूत साहसि झैँ टाउका उठाएर मुस्कुराइरहेका बिभिन्न जातका सुन्दर झारफूलहरु,कतैकतै साना खोल्ची जस्ता ठाउँमा त्यो खडेरिको छातीमा स-साना पानीका तालहरु जहाँ अचम्म लाग्ने प्यारा चराचरहरु पानीको चिस्यान संगै चिर्बिर चिर्बिर गर्दै नाचिरहेका अनी ढुङ्गाका धार टेक्तै हिँडिरहेका झुण्डझुण्ड पर्यटकहरुको हातमा त्यही अघिका भाङ्रे प्लास्टिकका थैलामा भरी भरी फाल्तु चिजबिज हेर्दै म आत्मादेखी फुरुङ्ग पर्दै अगाडि बढीरहेँ कहिले चिपोराको हात समाउंदै कहिले फोहोरको थैलो रामिको हातमा थमाउँदै ।
कती खेर आधादिन घर्कन लागेछ,हामी मोडियौँ होटेल तिर दिउंसोको खाना खान भनी। बिहान् देखिको थकाई र स्वादिलो खानाको आनन्दमा एकछिन सबैजना आ-आफ्ना बिस्तारामा फालियौं। तर म बेचैन् थिएँ एकछिन पछीको मेरो उत्सुकताको योजना 'स्न्यापलिङ्ग' सम्झेर। कतिबेला जानु जस्तो हुंदैमा मेरो रेस्ट आवर बित्यो। त्यसपछी लागियो त्यतै। पहाडी मुलुकमा जन्मिदैमा पहाडमा उपलब्ध सबै अवस्था र चिजबिजहरुको उपभोग सबैले कहाँ गर्न पाएकाहुन्छन र! मेरो पनि त्यस्तै कथा थियो। जीवनमै प्रथम पटक स्न्यापलिङ्ग गर्दै थिएँ। अग्लो चट्टाने ढिस्को बाट मुन्तिर हेर्दा मुटुनै चिसो भयो। अनी मैले पहिलो पटक १५ मिटर मात्रैको गर्ने भएँ। टाउकोमा हाडे ह्याट लगाएर कम्मरमा डोरिको लुर्को बाँधेपछी स्न्यापलिङ्ग् सम्बन्धी सामान्य जानकारी दीइँदोरहेछ। त्यो सकेपछी म माथि बाट गाईड ले भने बमोजिम एक हातले डोरी अड्याउँदै अर्को हातले अड्कल्दै दुबै खुट्टाले ढुङ्गे चट्टानटेकेर शरीर पछाडि धकेल्दै तल तल झर्न थालेँ। आधाआधी झरिसकेपछी माटो खानेको खोपिल्टो जस्तो आयो जहाँ खुट्टाले भर गर्ने ठाउँ भेटिन मैले। डरले निली हुंदै चिच्याएँ माथि बाट के के भन्दै थियो गाईड्ले तर म भने तिरिमिरी भिसकेको थिएँ । कसो कसो हातबाट आँफैँ डोरी खुकुलो भएर झरेछ र म पनि तलतिर हुत्तिएँ ,लाग्यो आजलाई छोरी बाँची । तल भुइँमा टेकिसकेपछी खुशी र घमन्डले नाक फुल्यो ,कतै सगरमाथा नै पुगेर आएँहुँला जस्तो।
घामको डुबाइ संगै हामी फर्कियौं होटेल र खाना संगै दिनको बिँट मारेर सबै लाग्यो आ-आफ्नो बिस्तारा तिर। आदत अनुरुप हिजोकै बाँकी "घुर्मी" च्यापेर म पनि सुस्ताएँ । केही पेज पनि पढिनसकी निदाएछु।
हाम्रो भ्रमण् को तेस्रो दिन याने कि ३१ मार्चको बिहान अबेर गरी आँखा खुलेछन मेरा। म उठ्दा त चिपोरा र रामी अगी नै उठेर पहिलो लट को कफी सुर्क्याइसकेछन्। म पनि हतार हतार तयार भएँ ,कफी संगै हल्का खाजा पेटमा पुर्याएपछी हामी लाग्यौँ अर्को एउटा महत्वपूर्ण यात्रा तर्फ। उक्त दिन हाम्रो मरुभूमिमा जीप ट्रिप जाने योजना थियो। योजना अनुसार हामी तयार भएर तोकिएको ठाउँमा पुग्यौँ। हामी तीन जना, एउटा रसियन अदबैँसे जोडी, दुजना इज्राएली बाबुछोरी र टुर गाइड ड्राइभर गरी जम्मा ८ जनाको हाम्रो टोली एउटा थोत्रो जीपमा भरिएर लाग्यो सन्सारकै ठुलो क्राटर हेर्न मरुभूमिको छातीतिर। ढुन्ङे गेग्र्यानका अचम्म लाग्दा प्राकृतिक आकृतिहरु,मरुभूमिको छातीमा फाट्टफुट्ट देख्न सकिने अचम्म लाग्दा बिशेष प्रकारका चराहरु,ढुङ्गे चेपमा कतैकतै मुस्कुराइरहेका सुन्दर फूलहरु,खरबौँ बर्ष पहिले प्रकृतिमा आएका उथलपुथल स्वरुप ज्वालामुखिबाट निर्मित काला पत्थरी पहाडहरु,त्यो उजाड गेगरको छातीमा कहीँ कतै देखिने स-साना पानी भरिएका खोपिल्टाहरु, साना थुम्का चिरिएका चेप बाट देख्न सकिने बिभिन्न खनिजका पत्रे सम्पदाहरुले मरुभूमिलाई पनि जीवन दिरहेको देख्दा मैले हरेक दृष्‍यहरुमा आफ्नै देशको कुनाकन्दरा खोजिरहेँ ,,हामीसँग यस्ता कतिकती छन् सम्पदाहरु तर उत्खनन् र सम्भारको अभाबमा बेखबर कुहीइरहेकाछन् हाम्रो गरीबिलाई अझै गहिरो खोँचमा पुर्याउँदै। बाटाघाटा बिहिन सुनसान मरुभूमिमा कतैकतै भेटिने अन्य टुर जीप बाहेक बेलाबेलामा ति बेचल्ति बाटाका खाल्टाखुल्टिमा जीप उफ्रिँदा हामी सबै हाँडिका मकै झैँ उचालिँदै पछारिन्थ्यौँ र थोत्रो जीपको छानै उड्ला जसरी एकैमुष्ट हाँस्थ्यौँ।
रमाइलापलहरु कती छिट्टै सकिन्छन् ,घाम टक्कै टुप्पी माथी उक्लिसकेछ । दिउसोको झन्डै दुई बज्न लागेको संकेत घडीले दिएपछी हामी फर्कियौँ होटेल। मरुभूमिको छाती नाप्नुमात्रै होइन जीपको घम्साघम्सी उफ्राइले दिएको थकानमा साबिक भन्दा ठुलै भाग खाना खाएपछी लखतरान भएर सबै लड्यौँ आ-आफ्ना कोठामा पसेर। असाध्यै मिठो निदाएछु त्यो अलौकिक ठाउहरुको मनमोहक दृष्‍यावलोकन पछीको थकाईमा। बेलुकी खाना खान हलमा झरेपछी झनै रमाइलो भयो। दुई जोडी सुन्दरसुन्दरी नतर्कीहरुको फुर्तिलो नाचसंगै तत्काल हिट मानिएको इज्राएली मायाप्रेमको गीत "आनी ओहेबेत ओताख्" म तिमीलाई माया गर्छु -सुन्दै खाना खाइसकेपछी संधै झैँ चिपोराका काकी भतिज गफ चुट्न थाले। म सुटुक्क पसेँ बिस्तारामा कसैगरी "घुर्मी" पढिसकेर सुत्छु भन्दै। "घुर्मी" को अन्तिम पातो भेट्दा नभेट्दै म ओइलाएछु निन्द्रादेवीको काखमा।
हाम्रो टुरको अन्तिम दिन अर्थात अप्रिल १ बिहीवार छिट्टैनै आँखा खुलेछन मेरा तर चिपोरा र रामी भन्दा चाँही ढिलै नै। हातमा आएको मौकालाई गुमाउन हुन्न भन्दै मैले अन्तिम दिनको बिहान घोड्चढी कार्यक्रम बनाएको थिएँ। हतार हतार बिहानको खाजा सकेर हामी लाग्यौँ फार्म तिर। होटेल देखी अलिक तेर्सो सडक हुँदै निक्कै नै टाढा रहेछ घोडाको फार्म। त्यहाँ अफ्रिकी मुलुकमा पाइने अनौठा प्राणी 'अल्पाका' पनि देख्ने मौका पाएँ जो खासगरी तिनका भुत्ला ऊनका लागि प्रसिद्द रहेछ। होचाहोचा कदका झन्डै ठिकैको भैँसिका पाडा जस्ता तर घाँटी चाँहीँ अलिक बेसी नै लामा, बाख्राको जस्तो लाग्ने थुतुनो अनी ठाउँ बिराएर अन्तै उम्रेको हाम्रो दाँत जस्तो लामो लामो दाँत बाहिर निस्केका ति अनौठा "अल्पाका" हेर्दै लागियो घोडा तबेला तर्फ।
शायद जीबनमै प्रथम पटक घोडाको लगाम समात्न पुगेको क्षण डरले छाती ढक्क फुल्यो मेरो। घोडचढीको हाम्रो ग्रुपमा दुई जना गाईड गरी १० जना भयौँ। सबैलाई एक एक वटा घोडाको लगाम थमाइयो। मेरो भागमा परेको घोडा इज्राएलकै नामी दौडिने घोडा रे ! म रोमाञ्चित पनि भएँ र भित्र कता कता अध्यारो डर पनि लाग्यो ,,कतै नामी घोडाले कान्ला बाट फाल्दियो भने!! सुरुमा ति गाईडले सामान्य जानकारी गराउँदा रहेछन् घोडाचढी बारे। जस्तै: कसरी रोक्ने, कसरी अगाडि बढाउने या पछाडि तान्ने, गती बढाउने या घटाऊने, दाँया बाँया मोड्ने आदी। सुरुमा डर लागे पनि मैले एकै मिनेटमा मेरो भागको चुल्बुले घोडालाई हातमा लिएँ। तैपनी ढुक्क हुनको लागि म चाँही अघी अघी हिंड्ने गाइडसंगै हिँड्न थालेँ। मेरो चुल्बुले घोडाको नाम रहेछ 'एबो'। संगैको गाईडलाई एबो को अर्थ सोधेँ तर त्यसको खासै अर्थ रहेनछ। त्यतिकै राखेका रे उस्को नाम एबो। तर एबो लाई राम्रै थाहा रहेछ उसको नाम एबो भनेर। तेर्पाङ्गे उकालो लाग्न थाले पछी एबो अली सुस्त गतिमा मलाई पिठ्युँमा बोकेर अगाडि बढ्यो। बाँकी ८ ओटा घोडा र घोड्चढीहरु पनि हाम्रो पछी पछी लहरै आए। मैले एसो हेरेँ हाम्रो अघी दुइटा, पछाडि तिनओटा र दाँया बाँया दुई दुई वटा गरी जम्मा नौ वटा रांगा जस्ता डरलाग्दा कुकुर हामीसँगै हिँड्दै थिए एकै तालमा। हामी घोडा बिसाएर बस्दा ति पनि अडिन्थे , हिंड्दा हिंड्थे। मैले अचम्म मानेर गाईडलाई सोधेँ। उसले भन्यो ति कुकुर तिनै घोडा फार्मका रे। र सुरक्षाका बलिया र भरपर्दा सिपाही पनि पो रे। उस्ले यो पनि भन्यो "हेरी राख, अहिले हामी फार्म बाट पर लाग्दइ छौं ,जब हामी फर्केर फार्म तिर लाग्छौँ यि कुकुराहरु दुइटा बाहेक सबै पछी हिँड्छन र दुइटा चाँहीँ अघी अघी लाग्छन्। नभन्दै जब हामी घोडा मोडेर फार्म तिर लाग्यौँ ति कुकुर अगी गाईडले भनेझैँ दुइटा अघी र बाँकी हाम्रो पछी पछी हिंड्न थाले। कुकुरहरुको यो तालिमप्राप्त सैनिक झैँ इमान्दार ड्युटी देखेर मलाई अचम्म र रमाइलोपनी लाग्यो। लग्भग दुई घण्टाको हाम्रो घोडा दौडाइ सकेर होटेल तिर हतारमा फर्किंदा मेरो अनुहार खुशीले उद्दिप्त थियो, जीवनमा पहिलो पटक घोडाको पिठ्युँमा बसेर त्यती लामो शयर गरेकोमा मक्ख पर्दै। दिनको १ बज्नुअगावै होटेल छोडिसक्नुपर्ने हुँदा हतारोमा आ-आफ्ना सामान प्याक गरेर लाग्यौँ घरतिर। बाटभरी मैले त्यो मरुभूमिको छातीमा बरालिएका चारदिन सम्झिँदै आफ्नै देशको प्राकृतिक सम्पन्नतालाई आँखाभरी छापिरहेँ ,,हामीकहाँ यसको हज्जारौँ गुणा चित्ताकर्षक प्राकृति सुन्दर छटाहरु छन् तर कहिले यसैगरी सबैको ,खासगरी राज्यको चासो बन्ला र सदुपयोग होला!!!
अरू पढ्नुहोस »
जागिरे जीवनको सुरुवात र आज फर्केर हेर्दा
दिप्स शाह on 2:28 AM
उसो त दैनिकी लेख्नु मेरो सानै देखिको बानी हो, अफसोसको कुरा यसमा निरन्तरता भने छैन। तर घर छोडेर परदेश लागेदेखि लग्भग दुई बर्ष लगातार चाँहीं अपबाद बाहेकका सबै सांझहरुमा आधा पन्ना मात्रै भएपनी दैनिकी लेखेको थिएँ। त्यो आज पल्टाएर हेर्दा लाग्छ ति प्रत्यक अक्षर मैले कुनै कलमको मसिले कागजको पानामा लेखेको नभएर बिदेसिनुको, एक्लो हुनुको र संघर्ष गर्नुको अत्यासपूर्ण समयको असह्य पीडाले बगाइदिएका अनगिन्ती आशुमा मानसिक तनाबको निब चोपेर जिन्दगीको छातीमा लेखिएको सर्बाधिक तिक्त दस्तावेज हो। जो जीवनकै बिछोडको भयानक कालखण्ड बनेर मलाई त झस्काइरहने छ नै मेरा परिवार, खासगरी जीवनको जोहो गर्न बाध्यताबस् मैले उसबेला छोडेर हिँडेको दुधेबालकले समयको सुदुरमा बुझ्न सक्नेछ कि उसकी बिबश आमाले के कस्ता समय भोगेको थीइ,,उसैका उज्यालो भबिस्यका खातिर भनेर।
त्यही अत्यासपूर्ण समयको पन्ना पल्टाउने क्रममा आज दिनै भरी बेसन्चो शरिर र बिक्षिप्त मन बोकी बिस्तारामा पल्टिएर एकसुरमा जीवनका जोडघटाऊ हिसाब गर्दै थिएँ। मनमा उठेका अनगिन्ती छालहरुले घरि घरि बिगत र वर्तमानका वारी र पारी भित्तामा लाँदै र ल्याउँदै मलाई बजारिरहे, पछारिरहे। अचानक आफ्नोजागिरे जीवनको सुरुवात र पैसाको भूमिका सम्झना पुगेँ। पत्तै नपाई विगतको दैलो घरक्क उघारेर म सुटुक्क छिरेछु ति पुराना यादहरुको गुँडुल्कोमा ।
बाबा बित्नुभएपछी हाम्रो परिवारको न्यानो सहाराको पुञ्ज सदाका लागि निभेन मात्रै हामीलाई खासगरी म जो भर्खर किशोरअवस्थामा रम्दै गरेकी छोरीलाई जीवनको सबै भन्दा ठुलो धक्का लाग्यो। एकाएक अचानक चारैतिरबाट जीवनको दैलोमा तगारा र चुकुलहरु तेर्सिन थाले। अचानक छरछिमेकका सबै मेरा स्वघोषित अभिभाबक बन्न थाले तर मेरो जिन्दगीको डोरी माथि तान्न होइन कि बरु सकेसम्म खुट्टा तानेर तल झार्नका लागि। छोरी हुनुको पीडा र बाध्यता त्यसबेला मैले टड्कारो महसुस गरेँ किनकी म भन्दा हुर्केको दाइले त्यो ताडना भोग्नुपरेको थिएन ,,छोरालाई त्यसकिसिमको बार बान्देज लागेन ,लाग्नु जरुरी थिएन उनिहरुकै परिभाषामा। बिद्यालयबाट अली अबेर फर्कन नहुने, मन लागेको बेला आफुखुसी बजारतिर निस्किन नहुने,आफ्नै बार्दलिमा निर्धक्क कपाल फिँजाएर घाम ताप्न नहुने, साथीसंगी भाईबहिनी सँग दिल खोलेर खित्किँदै हाँस्न नहुने। यदी यसो गरेमा "राँड्का शाढ्" भन्दै कुरा काटेर मलाई भन्दा मेरो विवश बिधवा आमालाई नानाथरिका डर त्रास आसंका कानमा भरेर मानसिक यातना दिन्थे। जसबाट भयभित भै मेरी बिचरी अनपढ सोझी आमा सँधै रुँदै मलाई भन्नुहुन्थ्यो,"अब तिम्रा बाबा रहेनन्, गाउँलेले कुरा काट्छन्,अरुले भन्नु र तिमीहरुले गर्नु एकै भयो भने म पासो लागेर मर्छु।" म आमाको त्यो मानसिक तनाब देखेर बिक्षिप्त हुन्थेँ। ति अज्ञानी चिसा मनका गाउँलेप्रती मनमनै भुट्भुटिन्थेँ र आमा लाई आश्वासत पार्थेँ,"आमा म हजुरको शिर झुक्ने त्यस्तो केही काम गर्ने छैन।"
समय आफ्नै गतिमा चलिरह्यो। स्वघोषित ति डाहाडे अभिभाबकहरुको ताडना सहंदै मैले बिद्यालय शिक्षा पुरा गरेर अलिक टाढाको नवस्थापित उच्चामाबी मा ११ कक्षा पढ्न थालेँ। तिनताका हाम्रा तिर स्थानिय रुटका सवारीसधन सञ्चालित थिएनन्। सडकको पेटिमा उभिएर लामा रुटका बस ट्रक जीप जे आयो त्यसैलाइ हात हल्लाउंदै रोकेर ५ रुपैयाँ तिरेर कलेज पुग्नुपर्थ्यो। बिहानका कक्षा सञ्चालित उक्त १०+२ मेरो जीवनको दैलो उघार्नमा कोशे ढुङ्गो नै साबित भयो। तर प्राप्तिहरु जीवनका सबभन्दा कञ्जुस पाटाहरु हुन्। एकातिर आउँछ अर्को तिर हराउँछ। यता टाल्यो उता ह्वाङ्गै। यसरी तानतुन गरेर अपुरा प्राप्तिको मानो मुठी समेट्दा समेट्दै पनि जिन्दगीले कतै बाट जिस्क्याइरहेकै हुन्छ एउटा अपुरो कुनामा बसेर।
अध्ययन त थालेँ तर फेरी आर्थिक समस्या अगाडि तेर्सियो अभाबको अजिङ्गर बनेर। घरको आर्थिक अवस्था र आमाको समस्या हेरी हेरी म आफ्नो नितान्त निजी जीवनको आगामी खुड्किलो खन्न कसैलाई अरु भार थप्न चाहन्नथेँ। त्यसैले बिहानको आफ्नो कक्षा सकेर बचेँको दिनभरिको समयलाई आर्थोपार्जनमा लगाउने सोच बनाएर दस तिर भनसुन गरेपछी गाउँकै प्राथमिक बिद्यालय(जहाँ मेरो शिक्षाको आरम्भ भएर ५ कक्षा सम्म चलेको थियो) मा गाबिसको निजी स्रोतबाट पारिश्रमिक् पाउने गरी २ बर्षको करारमा शिक्षिकाको जागिर पाउने भएँ। म खुशीको खबरले बाटाभरी एक्लै मुस्कुराउँदै घर तर्फ लम्किँदै थिएँ आमालाई सुनाउन भनी। बाटामा गाउँकै एकजना काका पर्ने स्वघोषित अभिभाबक सित जम्काभेट भयो। उनले खुशीले उद्दिप्त मेरो अनुहार नियाल्दै यती नमिठो ब्यङ्य प्रहार गरे,म तत्क्षण हजार टुक्रामा बिभक्त भएँ। "बाबु बितेका जवान छोरीहरु एक्लै एक्लै मुस्कुराउनु भनेको कुनै पट्ठो(केटो) संग लहसिएको संकेत हो।" उनको आशय यस्तै थियो। मन त लाग्यो उल्टो हातले काकको गाला बजाइदिउँ तर केही नभनी सरासर घर पुगेर आमालाई सम्भाबित जागिरको बेलिबिस्तार लगाएं।
पहिले त आमाको आँखामा खुशीको शप्तगण्डकी छचल्कियो फेरी बिस्तारै सुस्ताउँदै भन्नु भयो, "छोरी! तिमीलाई धपेडी हुन्न?? बिहान पढ्ने, दिउंसो पढाउने, पढ्ने ठाउँ पूर्व पढाउने ठाउँ पश्चिम। फेरी तलब पनि धेरै होइन बित्थामा तिम्रो ज्यान मात्र सुक्ने होकी!!"
आमाको आशँकाले म झस्किएं, हो त! पढ्ने एकातिर पढाउने अर्का तिर। भनेका बेला गाडी पाइन्न । सँधै एउटै समयमा आउनजान सकिन्न। आफ्नो घर छ बेसिमा ,जागिर गर्ने बिद्यालय आधा घण्टा उकालो हिँडेर माथि देउराली नेर पुग्नुपर्ने। तलब थियो मासिक १२५० रुपैयाँ। ; लाग्यो जागिर त नखाउंहोला, भोली टोक्नु न बोक्नु भयो भने!! म अनमनस्यक उभिरहेँ। फेरी झलक्क अघी भर्खर बाटमा स्वघोशित अभिभाबक काकाको ब्यङ्यबाण सम्झिएँ। मैले झन्डै चिच्याएर आमालाई भने," आमा! म जागिर खान्छु!" मैले आमालाई सम्झाएँ जतिनै दु:ख भएपनी यो मेरो जिन्दगीमा आत्मनिर्भरताको सुरुवात हो। नानाथरी ब्यङ्यबाण हान्ने गाउँछिमेकका मुखमा बुजो लगाउने केही हद सम्मको भएपनी उपाय हो।
यसरी मैले जीवनमा पहिलो पटक आँफैले कखरा सिकेको प्राथमिक बिद्यालयबाट जागिरे जीवनको सुरुवात गरेँ मासिक १२५० रुपैयाँ तलब पाउने गरी।
जीवन अनवरत तर कठोर् यात्रा हुँदै चल्दै थियो। बिहानै झिस्मिसेमै उठ्नु, तयार भएर कलेज पुग्नु, सँधै अन्तिमको बिषय क्लास नलिकन हतार हतार फेरी भोकै जागिर गर्न उकालो लाग्नु, भोको पेटमा दिनभर चिचिला केटाकेटिहरु संग कराएर साँझ घर ओर्लिनु,अनी बिहानको खाजा दिउसोको खाना र बेलुकिको खाना एकैमुष्ट खाइओरी राती अबेर सम्म टुकिको धिप्धिपे उज्यालोमा आफ्नो अध्ययन सकाएर बाँकी समय निकालेर पत्रपत्रीका बाहिरी पुस्तक पढ्नु,र लहडैलहडमा कबिता कथा कोर्नु,,यही कार्यतालिका अनुसार मेरो त्यो दुई बर्षको जागिरे जीबन गुज्र्यो। मैले पढाउने उक्त बिद्यालय गाउको माथिल्लो भेगमा पर्ने हुँदा नजिकमा खाध्यपसल, चियानास्ताको पसल थिएन ,त्यो ठाउको हालत अझै पनि त्यस्तै नै छ त्यसैले म दिनभरी भोकभोकै रहन्थेँ शनिबार र अन्य छुट्टीको समय बाहेक। यती गरेर बल्ल प्रतेक चार महिनामा बिद्यालयका अन्य स्थाइ शिक्षकहरुको चौमासिक तलब निकासा हुँदा संगै मैले पनि चार महिनाको तलब एकमुस्ट ५००० रुपैयाँ पाउथें। त्यती पैसाकोलागी खाली पेटमा त्यसरी दौडिनु पर्दा जती आहत हुन्थेँ त्यतिनै गौरवान्बित महसुस गर्थेँ आँफैलाई कखरा सिकाउनुभएको गुरुहरु संग स्टाफ भएर भलाकुसारी गर्दा। त्यो धपेडिले जती गल्थेँ त्यतिनै शितल र आत्माभिमानको महसुस गर्थेँ ति स्वघोषित अभिभाबक हरु कतै जम्का भेट हुंदा, कामबश् बिद्यालयमा आउँदा हात जोडेर "नमस्कार मिस!" भन्दा। ति कुरौटे इर्श्यालु छिमेकिहरुले हात जोडेर नमस्कार गर्दा बिजयको आभा फैलिन्थ्यो मेरो अनुहारमा। म सबै धपेडी र थकाई भुलेर खुशीमा आल्हादित हुन्थेँ। अहिले फर्केर हेर्दा उसबेलाको त्यो कठोर दिनहरु र त्यती न्युन पारिश्रमिकको जागिर मैले पैसाको लागि कम् ति डाहाडे गाउंलेहरुको नमस्तेको लागि बेसी खाएँ हुँला।
आज समयले धेरै पल्टा मारिसकेको छ। जिन्दगीको पैया घुम्ने क्रममा त्यसपछी पनि धेरै साना ,मझौला जागिर खांदै धेरथोर पैसा पनि देख्दै आएँ। अहिले केही बर्ष यता यही पापी पैसाकै लागि परदेश भासिएको छु आम नेपाली झैँ त्यही एक हिस्सा बनेर। टाढिनु,एक्लिनु र छट्पटिनुको साथै मानविय सेवामूलक काम र चित्त बुझ्दो पारिश्रमिक पाइरहेको छु भलै मान्छेको मन भरिने पैसा कहीँ कतै छैन। यि दिनका कमाइका तुलना उ दिनका कमाइ संग गरी सयभग लगाउदा पनि त्यो समयको पारिश्रमिक एउटै लहरमा उभिन सक्दैन र पनि त्यो १२५० रुपैयाँ मासिक को निमित्त मैले खर्चिएको जीवनको त्यो दुई बर्ष,त्यो दौड्धूप जतिनै कष्टकर होस् तर त्यही समय नै मेरो जीवनको सर्वाधिक अहम कोशेढुङ्गो र एक गर्वानुभूतिको अवधि बनेर जिन्दगीको दस्तावेजमा खोपिएको छ। ति दु:खद दिनहरु, त्यो कष्टकर दौडाइ, ति कटाक्ष ब्यङ्यवाण,तिनैका मुलायम नमस्ते, त्यो जागिर र त्यही १२५० रुपैयाँ तलबले नै मलाई मानसिक रुपमा बलियो बनायो। आँटिलो बनायो। जीवनका सिरुपाते धारयुक्त गोरेटा हरुमा ठम्ठमी हिँड्न सिकायो। मलाई वास्तबमै आत्मनिर्भर र स्वावलम्बन बाँच्न सिकायो। आज बाध्यताबस् परदेशिएर कमाएको सुबिधा र उपार्जनको अगाडि पनि जीवनको त्यो क्षणको भोगाइ हरदम स्वावलम्बी मुस्कान छरेर मलाई छामिरहेकै छ।
आज किन किन म फेरी अनायासै घरदेशको त्यो गौरवान्बित अनुभब र परदेशको नियास्रो कमाइलाई जिन्दगीको तराजुमा राखेर जोख्दै जोखिंदै छु ,,मध्यपूर्बको यो सानो टुक्रोमा म जस्तै बिरामी लाग्ने एकान्त बिस्तारामा पल्टिएर ।
दु:खान्त संस्मरण -अनुत्तरित प्रश्न
दिप्स शाह on 2:19 AM
ति दिनहरुमा म भागीभागी हिँड्थेँ। भरसक मान्छेका सामु नपर्नु परे हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। हुनपनि कसले बाँकी राखेनन् मलाई त्यो प्रश्न सोध्नलाई। जस्को मुखमै पनि एउटै प्रश्न हुन्थ्यो "श्यामि! भनन! किन? त्यो घटनाको कारण के थियो??"
घर, छिमेक, मेलापात, स्कुल, कलेज,जताततै सबै सबैले यती सम्म हैरान बनाउथेकी कुनैबेला त भाउन्न भएर बान्ता नै होला जस्तो हुन्थ्यो। जस्ले पनोइ त्यही प्रश्न गर्थ्यो जुन प्रश्नको जवाफ म आँफै संग थिएन। म आँफै अध्यारो गुफामा थिएँ र खोज्दै थिएँ त्यही प्रश्नको जवाफ तर मलाई थाहा छैन भनेर कसैले पत्याउदैनथिए। कसैले पनि विश्वाश गरेनन्। हरेकक्षण म आँफै सुन्यतामा सोधिबस्थेँ "हे भगवान! के हुन सक्थ्यो त्यो घटनाको कारण??"
आज झन्डै दशौँ बसन्तले फड्को मारेर समय कहाँ पुगिसक्यो। समय सङ्गै त्यो घटना र कारणको जिज्ञासा पनि सबैले भुलिसकेहोलान् । जिन्दगीको अपत्यारिलो यात्रामा मेरै जीबनमा कैयौ उतारचढाब आयो गयो, जीवन बाँच्ने घुम्ती र गोरेटो पार गर्ने यो दश बर्षको अवधिमा अन्य कैयन घटना घटे बिलाए। कैयन उतारचढाब स्मृ तिपट बाट सदाको लागि मेटिएर गए। तर त्यो डरलाग्दो घटना ,भयङ्कर आँधी,त्यो बिनाशी तुफान र त्यसले छोडेर गएको प्रश्न ले यतिका समयपछी सम्म पनि मलाई सताइरहेकै छ। र त्यही प्रश्न सङ्गै ति दिन त्यो बातावरण एकनाशले मेरो मथिङ्गलमा घुमिरहन्छ। निसास्सिएको मनले फेरी उही पुराना कुरा र उही प्रश्न दोहोर्याइ दोहोर्याइ अगाडिअौछ।
S.L.C पछिका बिध्यार्थीलाई त्यती बेला हाम्रो तिर फुकेको साँढे भन्ने चलन थियो। अझै पनि भन्छन होला। स्कुले तन्मयता,पावन्दी, गुरुहरुको निर्देश र निगरानी बाट उम्केका ति सुरुका दिनमा साच्चैनै हरेकका अनुहारमा एउटा बेग्लै उत्साह, उल्लास र चन्चलता देख्न लायकको हुन्थ्यो। घरदेखी ५ रुपैयाँ भाडा को दुरिमा पहिलो दिन ११ क्लासको उपस्थिति जनाउन जाँदा मैले खैरो रङ्गको कुर्ता सलवार लगाएको थिएँ। त्यो ठाउमै प्रथम पटक १०+२ सन्चालनमा आएको हुंदा अझै विद्यार्थी युनिफर्मको टुङ्गो नलागिसकेको अवस्थामा स्वतन्त्र लुगा लगाउन पाइएको थियो। पहिलो दिन हुन गैरहेको क्लास, थोरै डर, उमङ्ग सबै एकैपटक भुमरी खेल्दै थ्यो मनमा। हिच्किचाहट बोकेर कलेजको गेट भित्र पाइला राख्न साथ् जोड्ले खोकी लाग्यो ,पहिलो खोकिको तोड्मै बिडम्बना!! मेरो सुरुवालको इंजार पछाडिबाट झ्वाट्ट चुँडियो। आत्तिएर निली हुँदै कुर्ता बाहिरै बाट कुहिनोले सुरुवालको इँजार कमरमा अड्याएर हतार हतार एताउता कुर्ताको फेरोमा कतै सेफ्टी पिन छकी भनेर खोजेँ तर थिएन। मैले सोचेँ एकमनले घर फर्किउँ! तर कसरी?? म त एकपाइला पनि सार्ने अवस्थामा थिइन। पहिलो दिनको कलेज मेरो! म जड्वत उभीइरहेँ रसिलो आँखा लिएर।
अचानक कोही पछाडिबाट आएर सोध्यो ,
" तपाईं क्लास लिन आउनुभएको हो?"
झस्किँदै फर्केँ ,एउटी चन्चले आँखावाली केटी रहिछ हातमा चारवटा कपी किताब च्यापेकी । मैले उसको हो सङ्गै आफ्नो पिडा पनि सुनाइहालेँ एकै श्वासमै। लामो हाँसो हांसिसकेर उसले आफ्नो कुर्ताको भित्री फेरोबाट दुईटा लामा लामा सेफ्टी पिन झिक्दै भनी,
अनिउसैका आडमा च्यापिँदै सौचालय भित्र घुसेर ति सेफ्टी पिनका सहाराले सुरुवाल अड्याएर आफुलाई सेफ गरेँ । उसको नाम सन्जू रहेछ। पातलएे अग्ली लामो केश चन्चले आँखा र हमेसा ओठमा फैलिरहने उसको मुस्कानको कारण सबैका आँखा ऊ तिरै अडिन्थे।
त्यही सुरुको दिनको मेरो सुरुवालको इँजार र उसको सेफ्टी पिनले सुरु भएको हाम्रो मित्रताले तुरुन्तै बाट रङ्ग देखाउन थाल्यो। त्यही क्षणबाट हामी अत्यन्त नजिक भयौँ। मिलेर नोट गर्ने, एकको अनुपास्थितिमा अर्कोले कभर गर्ने, बिहान जो पहिले पुग्छ उसले अर्को लाई कलेजको गेट्मै पर्खिरहने, क्लासमा बस्दा सङ्गै बस्नुपर्ने, बाहिर जता निस्किँदा पनि हातमा हात गाँसेर हिँड्नुपर्ने,क्यान्टिनमा खाजा खाँदा पहिले एक भाग अर्डर गरेर एउटा प्लटेमा दुई तिर बाट खानु पर्ने, अनी अर्को भाग पनि त्यसै गर्ने,एउटै कपमा चिया पिउनुपर्ने ,,,तिन ताका हाम्रो मित्रताको त्यो रुप देखेर सबै छक्क पर्थे। मलाई थाहा छ कतिले त भित्र भित्रै इर्श्या पनि गर्थे। यती सम्म कि कहिले काही प्रस्नोत्तरको क्लासमा कुनै दिन उत्तर दिन नसकेको बेला गुरुहरुले समेत आज तिमी दुई जन अलग अलग बस भनेर सजाय दिनुहुन्थ्यो।
साच्ची भनु भने सन्जू बाहेक अरु कोही त साथी नै होइन या जरुरत नै पर्दैन भने झैँ लाग्थ्यो मलाई। हामी दुई बिच दु:ख सुख ,कल्पना, भविस्य का समेत कुरा हुन्थे। १०+२ सकेर काठमाण्डौ जाने, एउटै डेरामा बस्ने, जागिर खाने, सँगै मिलेर भबिस्यको खाका कोर्ने यस्तै यस्तै कुर हुन्थे हामी बिच । ऊ भबिस्यमा फेसन डिजाइनर बन्ने सपना बुन्थी। म समाजशास्त्र पढ्ने रहर गर्थेँ। तर हामी दुइको साझा रुची साहित्य थियो। सन्जू साहित्य पढेर आनन्द लिन्थी, म कहिलेकाँही लेखी पनि टोपल्थेँ।
छोटो अवधिमै सन्जू मेरो जीवनै अभिन्न अँग जस्तो बन्न पुगेकी थिई। हामी धेरै सँगै रुन्थ्यौं, हाँस्थ्यौँ, यस्तो लाग्थ्यो हामी पूर्व जनम देखिकै अभिन्न साथी हौँ।
फरासिली र सुन्दरताकी धनी अग्ली सन्जु कलेजको प्राङ्गणमा ठुलो स्वरले हाँस्दै गर्दा सबै केटाहरु फर्केर हेर्थे। कती केटीहरु जल्थे पनि। कुनै दिन ऊ या म क्लास नआउंदा अरुले सोधेर हैरान पार्थे। यस्तो कि हामी दुबैलाइ थाहा हुन्थ्यो एक अर्काको हरेक समस्या र कारण। पछी त हामीले एकजनाको काम परेको बेलामा दुई जनै नआउने गर्न थाल्यौँ। एक अर्का बिना क्लासनै शुन्य लाग्थ्यो। एक्दिन मैले जिस्किएर उसलाई भनेको थिएँ,"ओई! सन्जू! म अब बिहे गर्छु यार। केटाहरु घरमा आकोआकै छन् माग्नलाई।" यतिमै अध्यारो मुखलागएर त्यो दिन सन्जू निक्कै बेर रोएकी थिई। हामी सँगसङै मिलेर आफ्नो खुट्टामा उभिने, मिलेर भविस्य बनाउने भनेर तिमी अहिले नै बिहे गरेर मलाई एक्लै छोडेर जाने???" लामो बेरको सुँक्सुँक पछी सन्जूले यसरी मेरो बिहेको कुरोको प्रतिबाद गरेकी थिई।
एकदिन उसले भनी 'श्यामि! एकदिन मेरो घरमा हिँड न ! मेरो बाबा आमाले तँलाई खुब भेट्न खोज्नुभाको छ। "
त्यो दिन २०५७ साल मँसिर २३ गते शुक्रबार थियो। मैले आईतवार क्लास लिन आउँदा आमालाई सोधेर आउँछु भने। क्लासपछी घर जानेबेलामा म गेटको बाहिरै गाडी कुरेर बस्थेँ घर जानलाई। उसको घर चाँहीँ रोड काटेर धानको फाँटै फाँट झरेर तल खोल्ची तरेर जानु पर्थ्यो। मेरो गाडी नआउन्जेल म सङ्गै उभिरहन्थी ,अनी मात्र आफ्ना बाटा लाग्थी सँधै त तर त्यो दिन गेटमा पुग्नासाथ् मलाई फर्केर पनि नहेरी भनेकी थिई , "श्यामी! म गएँ है! आइतबार भेटुँला ।" मलाई थोरै अचम्म लाग्यो तर बाइ! भनेर उसलाई जाँदै गरेको हेरिरहेँ। फाँट बाट ऊ ओझेल परेपछी मेरो गाडी पनि आयो ,म घर तिर लागें। बेलुकी घरमा खाना खानेबेलामा आमलाई सन्जू को प्रस्ताब् सुनाएँ । पहिले त आमाले छोरी मान्छे अर्काको घरमा बासै बस्नेगरी किन जानु! भन्दै अन्कनाउनुभयो। हुन पनि मेरोपरिवारले सन्जूलाई कहिल्यै देखेको पनि थिएन। सिवाय मैले गर्नेगरेको उसको चर्चा र देखाएको फोटो बाहेक।
तर मेरो जिद्दी पछी आमाको तर्फ बाट सहमती आयो। त्यसपछी त खुशीले मैले खाना पनि मन गरेर खाइन। जसो तसो शनिबार याने कि २४ गते बित्यो। आईतवार २५ गते बिहान हतार हतार कलेजको लागि तयार भएँ। भरे सन्जूको घरमा रहँदा लगाउने लुगा पनि ब्यागमा कोचेर उत्सुकता साथ् कलेज लागेँ। घरबाट निस्किनै लाग्दा चोटा बाट आमा कराउनुभयो "भोली आउँदा सन्जू लाई पनि लिएर आइज नि!"
मँसिरको झिस्मिसे जाडो बिहान, एउटा राक्षसी चिसो हावाको झोँकाले बेस्सरी छिरल्यो मेरो कपाल जब म कलेजको गेटमा पाइला राख्दै थिएँ। सन्जू सँधै जसो त्यहा उभिएकी थिईन। मैले सोचेँ आज त म पो पहिले आएछु। त्यहीँ उभिएर उसलाई पर्खिँदै तल तल फाँटतिर आँखा कुदाएँ। अहँ ऊ आईन।
त्यतिकैमा क्लासकै एउटा केटो नजिकै आयो र भन्यो,"श्यामी! सन्जूले त हिजो स्युसाइड गरी रे नि हो??"
थाहै नपाई मेरो हात बज्रिएछ केटोको गालामा। ठीक त्यही बेला एक्जना गुरु आएर भन्नुभयो "श्यामी! कुरो यही हो , होसमा आउ!"
उनिहरुलाई लागेछ मैले थाहा पाएर पनि स्विकार्न सकिरहेको छैन।
म यो बकवास हो भन्दै चिच्याउँदै थिएँ, पछी पानीले निथ्रुक्क भिजेको अवस्थामा कलेजको प्राथमिक उपचार कक्षमा पाएँ आफुलाई।
अरुका अनुसार म रुँदारुँदै अचेत भएछु अनी साथीहरुले पानी पट्टी लगाइँदै राखेछन। चेत आएपछी मैले सन्जूको घरमा जान जिद्दी गरेँ ,जहाँ सोही दिन क्लासपछी जाने भन्ने सन्जूको र मेरो पूर्वयोजना थियो। आधी घण्टा धान खेतैखेत हिँडेपछी खोल्ची हुँदै जानुपर्नेरहेछ उसको घर। हामी ३ जान गुरु समेत ४३ जाना त्यता लाग्यौँ। सन्जू सबैकी प्यारी थिई त्यसैले पनि पुरै कलेज अत्यन्त मर्माहत थियो उसलाई गुमाउदा। म त शुन्यमा थिएँ ,सपनामा छु जस्तो लाग्दै थियो। बाटोको खोल्चिमा ३,४ टुक्रा काठ खरानीमाथी धुँवाउँदै थियो। सबैले मेरो मुखमा हेरेर खास्खुस गरे, त्यही खस्खुसको फुस्फुसमा मैले सुनिहालेँ कसैको मुख बाट "यहीँ हो उसलाई जलाएको। श्यामी लाई भन्नु हुँदैन।" म फेरी आकाश छेड्नेगरी चिच्यौँदै रुन थालेँ, मलाई लाग्यो त्यो खरानी मा लट्पटिउँ ,,,त्यहीँ म पनि जलुँ । साथीहरुको कब्जामा सम्हालिँदै सन्जूको घर पुग्यौँ। टन्न मान्छेहरु भिड लागेका, सबै रुँदा रुँदा थाकेका। मेरो तस्बिर मात्रै देखेको उसकी आमाले मलाई चिनिहालिन र चिलले चल्ल झम्टे जस्तो गरी मलाई छोप्दै सोधिन् "श्यामी! तिमी होइन श्यामी! तिम्री साथीले सबैलाई छोडेर टाढा गई! किन गई?? किन यो घटना घट्यो?? भन श्यामी ! तिमीलाई त थाहा छ अवस्य, किन श्यामी!!"
हो त! किन?? किन यो घटना घट्यो?? किन सन्जू मरी?? किन अचानक?? किन कहिल्यै मलाई केही भनिन?? सानो सानो कुरा देखी सुदुर भबिस्यको कुरा गर्थी म सँग उसले ,किन यही कुरो भनिन? सबैले हाम्रो मित्रता माथि इर्श्या गर्थे के सन्जूले हाम्रो मित्रता माथि विश्वाश गरिन?? यती क्रुर र अन्तिम निर्णय गर्नु अघी किन उसले मलाई ,उस्को जीवनको सबै भन्दा नजिकको प्यारी साथीलाई केही भनिन?? मैले कुनै दिन जिस्केर बिहे गर्छु भन्दा कती भाबुक हुँदै रोएकी थिई कि म उसलाई छोड्दैछु भनेर ,तर आज!! त्यती टाढा गई ,,कहिल्यै नफर्किने गरी! मलाई एक्लै छोडेर?? मैले सँधै सोच्थेँ हामी दुई बिच केही कुरो लुकेको छैन, तर उसले त्यस्तो सोचेको थीईन?? के थियो कारण?? किन मलाई पनि भनिन??
किन?? किन?? भन्दै म फेरी अचेत भएछु र यसपाली मलाई नजिकैको प्राथमिक उपचार चौकीमा लगेछन साथीहरुले । निक्कै बेर पछी होशमा आएपछी मलाई मेरो घरमा पुर्याइदिए।
त्यसपछी सबैले त्यही एउटा प्रश्न सोधेर मलाई हैरान बनाउथे । "श्यामी! तिमीलाई त थाहाछ त्यो कारण , किन भन्दिनौ??"
शिक्षक, साथी, परिवार, आफन्त सबैको आँखामा एउटै प्रश्न हुन्थ्यो मेरो सामु "किन?? किन गरी सन्जूले त्यस्तो?"' सबैले यही सोचेकि मलाई थाहा छ, म सँग त उसले अवस्य आफ्ना समस्या दु:ख बाँडी होली । तर अफसोश !! म आँफै अनभिग्य थिएँ । त्यो प्रश्नको जवाफ कहिल्यै कसैले जान्न नसक्ने गरी सन्जूले आफ्नै साथ्मा जलाएर लगिसकेकी थिई। हाम्रो छोटो समयमै अप्र्त्याशित मौलाएको मित्रताको कारण म माथिको सबैको त्यो प्रश्न जायज पनि थियो। मैले लाख पटक भनेँ कि म जान्दिन तर कसैले विश्वास गरेन। कसैले भने यो कती कप्टी केटी हो! चिसी! अब ऊ ता मरिसकी, त्यो कारण् भन्दा के हुन्थ्यो??" कोही भन्थे "साथीलाई दिएको वचन निभाएको होली!" तर सोच्न चाँही सबैले त्यही सोचेकि म जान्दथेँ त्यो किन को कारण। त्यसपछी अतिनै भएपछी म मान्छे देख्नासाथ तर्केर हिँड्न थालेँ। कैयन रातरात म अनिदो रहेँ। भोकै त कती बसेँ बसेँ। यती पिडा त मैले बाबा गुमाउदा पनि भोगिन कि!!उस्को मृत्युय ले म एकाँकी मात्र भईनकी सबैको आँखामा एउटी चिसो मनकी कपटी पनि बनेँ। हरपल म हावा सँग ,आकाश सँग ,शुन्य सँग सोधिरहन्थेँ "किन?? किन त्यस्तो गरिस सन्जू?? हेर! म आज कती एक्लो छु ,मैले हाँस्न भुलेँ तँ नहुँदा। कसरी सबैका ध्यान खिच्नेगरी हाँस्थ्यौँ हामी,, के थियो त्यस्तो समाधान ननिस्किने समस्या जसको लागि तैले चुपचाप जीवन चढाइस?? किन सन्जू किन???"
पुरै क्लासका विद्यार्थीहरुले युनिफर्मको कालो पेन्ट लगाउँदा उसैको रहरमा हामी दुइले मात्र कालो स्कर्ट लगाउने गर्थ्यौँ ,उसको बिदाइ पछी मैले कहिले त्यो कालो स्कर्ट फर्केर पनि आज सम्म हेरेको छैन। त्यही "किन?" दिमागमा घुमिरहँदा अगेनुमा हात घुसेको पत्तो नपाउँदा झन्डै सदाको लागि मैले हात गुमाइन, त्यही तर्कनामा एकदिन एउटा गोडामा लेडिज चप्पल र अर्कोमा जेन्स चप्पल लगाएर कलेज समेत पुगें। मेरै परिवार समेत डराए कि म अब पागल हुन्छु भनेर। तर सन्जूले म बाट ,दुनियाँ बाट टाढा जाँदा त्यो भयानक कारण आँफै सँग लगी। र मलाई सिर्फ त्यो "किन?" प्रश्न छोडेर गई। जसको जवाफ मैले अब कहिल्यै पाउन सक्नेछैन।
आज पुरा १० बर्ष हुन लाग्यो। सन्जू म सँग छैन तर उसको याद,ती मिठा क्षणहरु, त्यो कालो भयानक आँधिको दिन, त्यो सदाको लागि अत्यन्त क्रुर बिछोड,त्यसपछिका अन्त्यहिन बिरह र बेदनाका दिन हरु सबै सबै मेरो मन र मस्तिस्क बाट हट्न सकेको छैन।
अझै पनि एकान्तको अवस्थामा त्यो २०५७ मंसिर २३ गते शुक्रबार बिहान १०:३० बजे कलेजको गेट बाट हल्लिँदै भागेका उस्का प्यारा हातहरु र उस्को मन भित्र त्यो बेला गुम्सिरहेको उक्त भयानक घटनाको कारण अनी ,,,सदा सदाको लागि मलाई छोडेर गएकी त्यही प्रश्न "किन" अनुत्तरित बनेर मेरो आँखामा मनमा आइरहन्छ,,, बस् अनुत्तरित प्रश्न....\_\_
(सत्य घटना ,,उसबेला बाबाले मलाई बोलाउने नाम "श्यामी")
ताजा पोष्टहरू :
© सर्वाधिकार दिप्स शाह । by Lasantha and WPThemes